नपढ्नेलाई ठुलो दसा लाग्ने छ , आमा लाई सम्झी तस्बिर छोएर ॐ लेखि सेयर गर्नु!!!!!!! – Kavreonline Patra
मुख्य पृष्ठ /News/नपढ्नेलाई ठुलो दसा लाग्ने छ , आमा लाई सम्झी तस्बिर छोएर ॐ लेखि सेयर गर्नु!!!!!!!
७ सेकेन्ड भित्र फोटो भन्दा माथि दाहिने तिर देखिएको like बटनमा गर्नुहोस् र कमेन्टमा ॐ लेखेर ३ पटक सेयर गर्नुहोस् १४ घण्टा भित्र राम्रो संकेत मिल्नेछ ।।
परापूर्व काल देखी अहिले सम्म शिवलि’ङ्गलाई किन पुजा आजा गरी मान्छन ?किन के का लागि पुजा गर्छन ।
अन्य धर्मका मानिसहरु आफ्ना साना—साना बच्चालाई भन्छन् कि हिन्दुहरु लिं’गलाई पुजा गर्छन् ।
सबैलाई संस्कृतको ज्ञान पनि हुँदैंन ।आउनुस् यसको अर्थ जान्नुस् र भ्र’मबाट बच्नुहोस्ः लिं’गको अर्थ संस्कृतमा चिन्ह, प्रतीक हुन्छ ।शिवलिंगको अर्थ शिवको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।
पुरुष लिं’गको अर्थ पुरुषको प्रतीक भन्ने हुन्छ ।।**अन्य थप समाचार हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला**
बुद्धको पाईला जसले सेयर गर्छ उसलाई ७ दिन भित्रै निकै ठूलो खुसीको खबर प्राप्त हुनेछ ! साथ साथै धन लाभको सुरुवात हुनेछ! मात्र ॐ
लेख्नुहोस् !अनी सेयर गर्नुहोस मनोकामना पुरा हुनेछ !जन्म दिन कसरि मनाउने रु आफ्नी आमालाई ढोग्ने अरुकी आमालाई नमस्कारगर्ने हाम्रो संस्किर्ती हो । आमालाई पहिलोसम्मान दिनु हिन्दु धर्मको बिशेषता हो ।
र आफ्नो जन्मदिनमा आमालाई विशेस पुजाआजा गरि श्रदाभक्ति सहित उपहार दिन्छन । आमाले दुइ सन्तान जन्मायर मातातिर्थऔंसी बाहेकै दुइ पटक आमा बनेको पिडालाई भुल्ने अवसर पाउछिन ।
आमा बुवालाई बालक जन्माउन एवम पालन पोषण गर्नमा जति क्लेश (दर्द ) सहनुपर्छ त्यसको ॠण चुक्ता गर्नका लागि बालकले संयौ बर्स सेवा गरेपनि तिर्न सक्दैनौ । जनि प्रादुभावे धातुबाट जन्म सब्दको निर्माण हुन्छ । जायते इति जन्म अर्थात आकार,स्वरुपमा आउनु वा प्राप्त हुनुलाई जन्म भनिन्छ । जसमा जन्माउन सक्ने सक्तिछ त्यसलाई जननी वा आमा भनिन्छ ।
आकाशलाई बुबा र पिर्थ्बीलाई आमा भनिन्छ । आमाले नै कृष्ण,राम,बुद्द्लाई जन्मायकिहुन। त्यसकारण जन्म दिनमा पहिले आमालाई पुजा गर्नु पर्दछ । जति चुनौती उति नै उपलब्धि आमाले जति संधर्ष,पिडा सहनु पर्छ त्यसको पर्तिफल उतिनै धेरै छ विवेकी छोराछोरीका लागि ।बच्चा जन्माउदा आमा जीवन-मरणका बिचमा उभियकी हुन्छिन ।
विद्यार्थीका लागि आयो ‘एनसेल अडियो क्लास’, कक्षा १ देखि ४ सम्मका विद्यार्थीले जहाँबाट पनि लिन सक्ने